Gbasara anyị - Yancheng Yi'an Building Steel Technology Co., Ltd.
Yancheng Yi'an Building Steel Technology Co., Ltd. bụ ihe enterprise tụnyere nnyocha na mmepe, imewe, mmepụta, echichi na ahịa nke prefabricated ígwè Ọdịdị Herọd usoro na ọcha ụlọ usoro. Ọ nwere a oru otu na ọgaranya ihe ọmụma na management ahụmahụ na ubi nke ígwè Ọdịdị Herọd na ọcha ụlọ. Steel Ọdịdị Herọd usoro ọtụtụ-eji elu-ịrị elu obodo ụlọ, ngosi emmepe, nkwakọba lọjistik, ulo oru osisi, ọdụ ụgbọ na ámá egwuregwu. A na-eji usoro ime ụlọ dị ọcha n'ọtụtụ mpaghara dịka ọgwụ, nri, kemịkalụ kwa ụbọchị, semiconductor eletrọniki, nchọpụta aerospace na ime ụlọ ọhụrụ dị ọcha, ụlọ ọrụ na-enweghị isi, ụlọ nyocha ihe ọmụmụ, wdg.
The ụlọ ọrụ mechaa nzere ntozu nke elu-tech ụlọ ọrụ na Jiangsu Province na ISO9001 quality usoro asambodo, na nwere mba elu-tech ngwaahịa na a ọnụ ọgụgụ nke ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ.
Izute ahịa ina nke àgwà na gbakwasara ọrụ, ụlọ ọrụ na-eme nnyocha sayensị na ọhụrụ site n'itinye a ezi uche na pragmatic obibia na-agbaso azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "ewu dị ọcha ohere na sayensị na nkà na ụzụ, na powering pụrụ iche n'ọdịnihu na ọhụrụ", iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche. The ụlọ ọrụ ọma mepụtara ngwaahịa kwekọrọ na European ọkọlọtọ dị ka guzo onuete usoro, abụọ kpachie roofing usoro, metal mejupụtara ụlọ elu usoro, n'ala amị efere usoro, CZ ígwè purlin, ọcha efere na akụrụngwa. Ntanetị nke Yi'an nwere ọtụtụ usoro mmepụta ihe na-akpaghị aka, ụzọ nchekwa ụlọ nkwakọba ihe atọ dị ọcha na ọtụtụ ngwa mpempe akwụkwọ akara ọnụọgụ. Ike mmepụta kwa afọ nke ngwaahịa dịka mbadamba ígwè, bọọdụ nkwakọba ihe dị ọcha, mbadamba aluminom-magnesium-manganese, aluminom zinc efere, efere nchara nchara na efere nkwado ala ruru nde mita 5.
"Ezi obi, ihe ohuru na itinye uche" bu isi ihe anyi nwere. Anyị na-agba mbọ na-enye elu-edu ngwaahịa maka ọha mmadụ na-ezi imewe, magburu onwe n'ichepụta technology, management otu na zuru okè mgbe-sales ọrụ, na Aims na-abụ ihe ngwọta zuru ezu na-eweta maka ígwè Ọdịdị Herọd usoro na ọcha usoro.
780mm transversal panel nwere usoro
Nsogbu ikuku nke ikuku
Prefab ụlọ oru ngo
Nrụ ọrụ ọcha ụlọ